Pancake Keke + Pancake Yakavhenganiswa Keke Recipe - Cake
Pancake Keke Recipe
Iyo Pancake Keke Inotaridzika Senge Yakawandisa Pancakes, Inonaka sePancake Asi Iyo Ikeke!
Iyo pancake keke inogona kunge iri yakanyanya meta keke yenguva dzese. Iri keke rinotaridzika sepakeke uye rinonaka sekapakeke asi zvinehunyanzvi keke. Kana ndizvo? Chii chaizvo chinoita keke keke zvakadaro? Ini ndinoshamisika chinhu chimwe chete nezve makeke. Kana isina chando chando ingori muffin?
maita sei keke yemuchato keke
Pancake Keke Pfungwa
A chinguva kudzoka ndakaita yakazara-on chisvusvuro mubhedha dzidziso yakazara neakaunganidzwa mapancake uye giravhiti inozvidza manyuchi bhodhoro. Ini ndaisakwanisa kunyatso kuzvidaidza kuti mukeke wekushongedza kunyange dai ndaingoita kuti iite kunge mapancake, ndaifanirwa kuita kuti inakidze semapancake zvakare.
Ndainakidzwa chaizvo ndichigadzira keke iri, ndakariisa muchikamu che Anoseka Makeke paChikafu Network sechikamu cheGIANT foodie. Iyo keke yakagadzirirwa shamwari yangu Krissy kupemberera kwekutanga kwebhuku rake rekudya, Kuzvizivisa Kwako Foodie .
Kuwana iyo 'pancake flavour' kwaive kwakanyanya kuoma uye ini ndakaedza netani ye 'pancake' yakavhenganiswa keke mabikirwo andakawana online uye mazhinji acho anotadza. Ini ndaisada kungoshandisa Bisquick pancake musanganiswa.
Kana ndichifunga kuruma mupancake ndinoyeuchidzwa nezve butter, maple manyuchi uye zvishoma zvinyoro nyoro, kupenya kupfuura mweya wepancake dhizaini. Zvekungonakidzwa chete, ini ndakakanda mune rimwe bhata bhekoni!
Saka ngatitorei izvi zvakatwasuka. Iri keke, rinotaridzika kunge mapakeke, asi haazi mapani, iro chairo keke, asi rinotapira semapancake ...
Maitiro Ekugadzira Pancake Yekuzvarwa Keke
Iwe haufanire kuwana yakanakisa fancy kuti uite yako wega pancake keke rekuzvarwa! Zvese zvaunoda matatu matatu masendimita makeke, akafukidzwa akafukidzwa. Usatombo kunetseka nezvekuvhara zvakakwana kana kuita kuti zvinyatsotsetseka.
Nekuda kwechando haugone kukanganisika neiri nyore buttercream yakasanganiswa ne tsp yeaple flavoring mushoma kana iwe unogona kugadzira iyo yakarungwa caramel buttercream. Rimwe basa zvishoma asi sooooo inonaka!
Mushure mekunge mapfekera keke rako, ri chill mufiriji kuti irege kutsvedza uye kutenderera panguva yekushongedza.
Nezve iyo pancake inonyengera, ingo buritsa imwe nyoka dzenzou fondant. Ita iyo nyoka pamusoro uye inch kukora. Cheka nyoka iri pakati nebanga kana mucheka pizza kuitira kuti igare padivi. Putira nyoka yakakomberedza keke.
maitiro ekugadzira bhokisi keke kuravira sekeke remuchato
Ini ndinoda kupenda mativi aine maburi mashoma uye madhi kuti upe iwo chaiwo mabhuru ekugadzirwa. Usati waisa nyoka inotevera pamusoro, penda kumeso nemusanganiswa weruvara rwekudya hwenzou nedoro. Shandisa bhurashi rinokwenenzverwa risingakwanise kune zvimwe zvakawanda.
Ini zvakare ndinoedza kugadzira yega yega pancake materu akasiyana zvishoma uye akasvetuka. Edza kusavaita vakanyanya kukwana.
Paunenge iwe uchinge wasvika kumusoro, bata kunze buttercream zvishoma saka iyo yepamusoro iri chikamu. Wobva waburitsa chidimbu hombe chenyanga dzenzou yako ndokuvhara pamusoro. Ini ndinoda kusungirira rimwe divi pamusoro pemupendero senge irikubata bata uye mudura wese wave kuda kupunzika!
Kana imwechete yekupedzisira yavepo, penda kumusoro kweiyo fondant neiyo yakafanana yenyanga dzenzou chikafu chemusanganiswa. Kana iwe uchinzwa kushupika chaiko, unogona kugadzira imwe chaiyo sirafu chaiyo uchishandisa yangu chaiyo gummy recipe uye kupenda imwe neimwe yenyanga dzenzou uye inodziya chikafu chevaravara. Kana iwe unogona kushandisa decogel makara nenzira imwechete kana iwe usingade kuzviita yako.
Ini ndinoda torch mashoma mashoma makatekiti pane mamwe makeke 'anotsemuka'. Uyezve ini ndinongoda kushandisa yangu creme brulee torch lol.
Ndakagadzira patsva mbiri dzemafuta asi ndichipenda fondant neimwe yero uye kubata kwenyanga dzenzou ndokucheka kuita mativi maviri madiki. Kana iwe uchida kugadzira bhuruu, iwe unogona kupenda imwe fondant yehumambo bhuruu nekubata kwepepuru. Rongedza mubhora uye shandisa chishandiso chekuteedzera kumagumo kuti utaridzike sebhuruu.
Duncan hines sitirobheri keke sanganisa zvigadzirwa
Isa danda rako rakapedzwa remapancake mufiriji kuti utonhorere usati wanyorova manyuchi. Iyo inotonhora inobatsira gelatin kumisikidza nekukurumidza.
Kana paine chero sirasi inodonha ichibva kumucheto, ingo cheka chakawandisa wochidzosera mumudziyo kuti ushandise gare gare.
Izvo izvo! Kugadzira pancake keke iri kunakidza uye nyore kuita. Iyo hombe keke rekuzvarwa keke zano kune iye pancake mudiwa muhupenyu hwako.
Mangwanani akanaka! Iri keke ndere mudikani wekudya kwekuseni, rinotapira kunge svinga remapancake manyowani. Pair iyo pamwe nebatch yemaple syrup-yakavhenganiswa buttercream uye yakabikwa bhakoni! Yum! Iyi kamukira inogadzira matatu 6'x2 'keke kutenderera kana maviri 8'x2' keke kutenderera. Gadzirira Nguva:makumi maviri mins Nguva Yakabika:30 mins Nguva Yese:makumi mashanu mins Makorori:2023kcal
▢8 zvimedu (8 zvimedu) bhekoni
▢1/3 mukombe (1/3 mukombe) maple manyuchi
▢1/2 mukombe (1/2 mukombe) shuga tsvuku
▢12 oz (340 g) AP hupfu
▢12 oz (340 g) shuga yakanaka kwazvo
▢2 1/2 tsp (2 1/2 tsp) poda yekubheka
▢8 oz (227 g) unsalted ruomba imba temp
▢1/2 tsp (1/2 tsp) munyu
▢piri tsp (piri tsp) maple kuravira
▢4 yakakura (4 yakakura) mazai imba temp
▢8 oz (227 g) mukaka imba temp
Isa bhakoni pane tambo yewaya pamusoro pepepa-yakashongedzwa yekubheka jira, bhura kumusoro kwebhekoni ne maple sirasi uye kusasa shuga tsvuku pamusoro.
Bika muovheni yakapetwa mazana manaF / 200ºC kwemaminitsi gumi nemashanu.
Flip bacon pane waya rack, bhurasha maple manyuchi kune rimwe divi uye kusasa shuga tsvuku pamusoro.
Bika kwemimwe maminetsi gumi nemashanu kana kusvika padanho raunoda rekupenga rasvika.
Kana uchinge wabviswa muhovhoni, isa pamapepa echinyorwa uye pafiripi kazhinji kusvikira watonhodzwa kuti isanamatira.
Preheat oven kusvika ku 350ºF / 175ºC. Gira matatu matatu 'mapani ekeke nekeke goop.
Sanganisa upfu, poda yekubheka uye munyu woisa parutivi
Mundiro yemusanganisi wekumira neye padanda padyo, kirimu bota kusvikira yanyoroveswa. Fukidza mushuga uye wedzera kumhanya kusvika pakati. Rega kusanganisa 6-10 maminetsi kusvikira mwenje muvara uye fluffy
Wedzera mumazai ako IMWE NENGUVA. Regai musanganise maminiti akazara mushure mega kuwedzera kwezai musati mawedzera rinotevera.
Wedzera hupfu hwako nemukaka mukuchinjana muzvitatu. Tanga ne 1/3 yeupfu hwako, rega ubatanidze, wobva wawedzera mu 1/3 yemukaka wako, wobva wafura, wobva waita mukaka, wozoita hupfu, wozoita mukaka. Sanganisa mamwe gumi nemasekondi kuti ubatanidze.
Gurai muzvikamu zvitatu 'mapani. Zvimedu zvichave zvipfupi zvishoma pane zvakajairwa kuti uve neakawanda 'crunch' kubva ku browning yakanangana nepani uye inowedzera kunhuhwira kwepancake. Iwe unogona zvakare kushandisa maviri 8 'mapani kana iwe uchida marefu matete.
Bika kwemaminetsi makumi maviri kana kusvika jekiseni rezino rakaiswa rikabuda rakachena. Rega kutonhorera uye chando zvine nyore buttercream yakasanganiswa ne tsp yemaplevidza uye bhakoni rako rakachekwa.
Kana uchishusha keke, nyungudutsa mafuta mukapu kadiki uye woikwesha padivi rega rega kuti upe kunhuhwira kwemafuta mukeke repanikuni.
Makorori:2023kcal(101%)|Carbohydrate:267g(89%)|Mapuroteni:30g(60%)|Mafuta:94g(145%)|Mafuta Akaguta:makumi mashanug(250%)|Cholesterol:456mg(152%)|Sodium:932mg(39%)|Potassium:997mg(28%)|Fiber:3g(12%)|Shuga:174g(193%)|Vhitamini A:2395IU(48%)|Calcium:408mg(41%)|Iron:7.3mg(41%)
maitiro ekugadzira iyo unicorn nyanga yekeke
nzira yekubheka sitirobheni keke kubva pakutanga
coconut keke nekirimu chizi icing